Ahoana ny fomba hahazoana hevitra bilaogy amin'ny alàlan'ny Google
Alatsinainy 14 Febroary 2011 Talata, Oktobra 4, 2011 Michael Reynolds
Araka ny efa fantatrao, tsara ny fanaovana bilaogy content marketing hetsika ary mety hitarika amin'ny fanatsarana ny toeran'ny motera fikarohana, ny fahatokisana matanjaka kokoa, ary ny fisian'ny media sosialy tsara kokoa.
Na izany aza, ny iray amin'ireo lafiny sarotra indrindra amin'ny fitorahana bilaogy dia ny fahazoana hevitra. Ny hevitra bilaogy dia azo avy amin'ny loharano maro, ao anatin'izany ny fifandraisan'ny mpanjifa, ny zava-mitranga ankehitriny, ary ny vaovaon'ny indostria. Saingy, fomba iray hafa tsara ahazoana hevitra bilaogy ny fampiasana tsotra ny vaovao Google valiny eo noho eo endri-javatra.
Ny fomba fampiasana izany dia ny fanombohana fanoratana amin'ny teny lakile izay mifandraika amin'ny indostriao, ary avy eo jereo izay nofenoin'i Google ho anao. Ohatra, avelao hiteny ianao mihazakazaka a bilaogin'ny sakafo ary mitady hevitra ianao. Ireto misy ohatra amin'ny fikarohana azonao atao:
Amin'ny fanoratana fotsiny ny "fisakafoanana any ivelany" eo amin'ny boaty fikarohana dia misy ny sasany atolotra anao teny lakile lava safidy mety hanjary lohahevitra bilaogy. Ity misy ohatra iray hafa:
Amin'ny fanombohana ny fikarohana ataonao amin'ny "sakafo" dia mahazo hevitra eo noho eo ianao izay mety hanjary lohateny lehibe. Ohatra:
“Fomba fanamboarana tambajotra sakafo: izay tsy lazainy aminao amin'ny fahitalavitra”
"Toro lalana piramida sakafo: resadresaka nifanaovana tamina manam-pahaizana momba ny sakafo telo any an-toerana"
Amin'ny fanombohana ny lohatenin'ny bilaoginao amin'ireto teny fikarohana ireto dia mampifanaraka ny lohahevitry ny bilaoginao amin'ny andian-teny izay tadiavin'ny olona ianao, izay mampitombo ny fahafahanao ho hita amin'ny alàlan'ny karoka Google.
Raha raikitra ny sainao ary tsy afaka mamoaka lohahevitra amin'ny bilaoginao manaraka, mankanesa any amin'i Google ary atsipazo teny mifandraika amin'ny indostriao. Mety hahita hevitra tsara sasany mety hanatsara ny SEO anao koa ianao.
Tags: Analyticsvalin'ny orinasafahombiazanamultidomainpage speedSearch MarketingSliderWordPress
Michael dia Filoham-pirenena & CEO an'ny SpinWeb, maso ivoho nomerika manatitra famolavolana tranonkala orinasa vahaolana ary Hafanàm-po an-barotra. Michael dia inbound Marketing Certified ary miteny nasionaly amin'ny hetsika indostrialy.
Tsy mijanona amin'ny tranokalanao ny SEO
Ny fandaniana amin'ny haino aman-jery sosialy dia hampitombo 18% + ao anatin'ny 5 taona
20 Mey 2011 tamin'ny 8:04 hariva
Vaovao vaovao eo amin'ny sehatry ny fanaovana bilaogy aho (http://jasonjhr.wordpress.com/) ary nanana olana tamin'ny famoahana hevitra momba ny bilaogy. Fetsy tsara io hampifantohana hevitra vitsivitsy, ary angamba hahitanao hevitra vaovao.
Mihevitra ve ianao fa hanampy amin'ny safidy SEO sy teny lakile koa izany?
22 Feb 2011 tamin'ny 2:07 maraina
Heveriko izany, satria mampifanaraka ny lohahevitra amin'ny bilaoginao amin'ny fikarohana malaza ao amin'ny Google ianao. Ny SEO dia misy ampahany mivezivezy be, na izany aza 🙂
Marketing iray degre
Mar 28, 2011 ao amin'ny 4: PM PM
Mamaky tsara. Zava-dehibe ho an'ny orinasa ny famoahana atiny vaovao hatrany ary ny famoahana hevitra momba ny atiny vaovao tsy tapaka. Zava-dehibe ny hipetraka sy handamina mialoha, hanokana fotoana kely ary hifantohana amin'ny paikadin'ny votoatinao. Manomboka amin'ny laharana Google ka hatrany amin'ny fananganana rohy, mendrika ny fotoana sy ezaka be izao!
Jul 10, 2016 amin'ny 8: 39 AM
Tolo-kevitra mamirapiratra, aleoko mandray hevitra isan'andro isan'andro mba hahafahako manolotra ny endrika famakiana akaiky indrindra an'ny mpamaky.